Ukufundisa amalungu – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
/ Ukufundisa amalungu
Ukuxhumana ngezindaba zesikhwama kuncike kumalungu. Inhloso yokuxhumana kanye nokufundisa amalungu ukuwasekela, ukuthuthukisa kanye nokunika amakhono amalungu ethu kanye nalabo asebethathe umhlalaphansi. ISikhwama singesinye sezikhwama zempesheni eNingizimu Afrika ukuhlangana nomlawuli i-Financial Services Board ukufundisa nokuthuthukisa amalungu ngokubaluleka kokonga. ISikhwama sesiqale futhi amaphrojekthi azothuthukisa ukuziphatha kangcono kanye nokuqonda kumalungu.
Inhloso kaMehluleli weSikhwama seMpesheni ukuxazulula ukungaboni ngasolinye ngendlela enenqubo egculisayo, engabizi futhi esheshayo. Ihhovisi likamehluleli liphenya bese liqagula izinkonondo zokusetshenziswa kwamandla ngendlela okungeyona, ukungakwazi ukuphatha, ukungaboni ngasolinye ngokwamaqiniso noma ngomthetho kanye nokuhluleka ukwenza umsebenzi wesikhwama sempesheni.
NgoSeptember 2015, iSikhwama siqeqeshe abasebenzi base-Human Resource nama Payroll officers emahhovisi eNJMPF eWestville, eThekwini.
Lolu qeqesho beluhlanganisa izikhulumi eziqhamuka ezikhungweni ezaziwayo ezinjenge-Financial Services Boards (FSB) kanye nabaqhamuka eHhovisi laBehuleli beZikhwama zeMpesheni (OPFA). Abamele i-OPFA ngesikhathi kuqhubeka lolu qeqesho benze isethulo basho nokuthi benzani futhi bakhuluma ngezindaba ezimayelana nemiHlomulo yokuHoxa.
I-Financial Services Board (FSB) iyona elawula imboni yomhlalaphansi kanti futhi yilona ibhodi esemthethweni lapho iSikhwama sibika khona ngokwemigomo yoMthetho weSikhwama seMpesheni. ISikhwama kanye ne-FSB benze iphrojekthi yohlelo olwengeziwe ngo 2014 no 2015 ukufundisa amalunga ngezezimali. Inhloso yeSikhwama kanye nohlelo lokufundisa ngezezimali lwe-FSB ukunikeza uhlelo oluphelele lapho iSikhwama kanye ne-FSB iqinisekisa ukuthi yandisa ulwazi kumalungu ngezimali zawo nangezindlela zokulawulwa kwezimali, ukuhlelela imali, ukukhetha imali kanye nolwazi ngezezimali. Lokhu kuvumela ukuphathwa kahle kwemali, ukuncishiswa kwezinga lezikweleti, kubasebenzi bakamasipala bese lithuthukisa amalungu. Ucwanigo oluqoqiwe lwahlanganiswa ngesikhathi nangemva koqeqesho kanye nemfundiso kukhombisa impumelelo yeSikhwma sibambisene ne-FSB
ISikhwama ngo 2015 sisebenzisane ne-J Leslie Smith & Company Inc. (Umeluleki weSikhwama kwezomthetho) ukufundisa amalungu eSikhwama ngokubaluleka kokudweba uhla lwefa (Will) ngoba iSikhwama sikholelwa ukuthi i-Will iyingxenye yokuhlelela imali. Lolu hlelo lunikeza amalungu indlela yokukwazi ukwenza ama-Will mahhala. Ukuba ne-Will ngenye yezinto ezibalulekile ongazenzela zona kanye nomndeni wakho. Akukona nje ukuthi i-Will izovikela umyeni/unkosikazi wakho, izingane kanye nempahla, ingasho ngqo ukuthi ungathanda ukuthi impahla yakho iphathwe kanjani uma sewushonile. Amazinga emiHlomulo engalandiwe/engathathiwe ezikhwameni zempesheni eNingizimu Afrika abonisa ukubaluleka kokuthi abantu babe nama-Will.
Igxathu eliya phambili leSikhwama ngo 2015 kube ukuhlangana ne-Absa Trust ukufundisa ngezezimali kulabo abanakekela/abagada abasuke bezohlomula. ISikhwama sikubeka eqhulwini ukuqinisekisa ukuthi ukuxhumana akwenziwa kuphela ngesikhathi umuntu esaphila kahle kodwa kuyaqhubeka kwenziwe kulabo abazohlomula kanye nabanakekelayo. Ngomhlaka 20 May 2015, iSikhwama sihlanganyele ne-Absa Trust senza i-roadshow kulabo abanakekelayo kanye nabagadi abasuke bezohlomula. Okutholwe yiSikhwama, kusetshenziswa ulwazi oluqoqwe ocwaningweni lwase luyahlanganiswa emva komhlangano wokucobelelana ngolwazi (workshop) nolwazi olutholakale kulabo ebebesemhlanganweni wokucobelelana ngolwazi, kuveze ukuthi iSikhwama siphinde sadlula kakhulu kulokhu obekulindeleke kusona.